ပင်မစာမျက်နှာ » နိုင်ငံတကာသတင်းများ » ဂျမေကာသတင်းထူးများ
အမျိုးအစား - ဂျမေကာကြားဖြတ်သတင်းများ
ဂျမေကာခရီးသွားများနှင့်ခရီးသွားကျွမ်းကျင်သူများအတွက်ခရီးသွားနှင့်ခရီးသွားသတင်း။ ဂျမေကာနိုင်ငံသည်ကာရစ်ဘီယံကျွန်းနိုင်ငံဖြစ်ပြီးစိမ်းလန်းစိုပြည်သောတောင်တန်းများ၊ မိုးသစ်တောများနှင့်သန္တာကျောက်တန်းများကမ်းခြေများရှိသည်။ အားလုံးပါဝင်နိုင်သည့်အပန်းဖြေစခန်းအတော်များများသည် Montego Bay တွင်၎င်း၏ဗြိတိသျှကိုလိုနီခေတ်ဗိသုကာနှင့်အတူရေငုပ်ခြင်းနှင့်ရေငုပ်ခြင်းနေရာများကြောင့်လူသိများသည့် Negril ရှိသည်။ ဂျမေကာသည်ရက်ဂေးဂီတ၏မွေးရပ်မြေအဖြစ်ကျော်ကြားသည်။ ၎င်း၏မြို့တော် Kingston သည်ကျော်ကြားသောအဆိုတော်အားဆက်ကပ်အပ်နှံထားသော Bob Marley ပြတိုက်၏နေရာဖြစ်သည်။
ဂျမေကာခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီးကို GITT သံတမန်သစ်အဖြစ် ခန့်အပ်ခဲ့သည်။
ဂျမေကာခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီး Hon. Edmund Bartlett (ဓာတ်ပုံတွင်ညာဘက်တွင်မြင်ရသည်) ၎င်း၏အစိုးရရုံးနှင့်...
ဂျမေကာ- အထူးလေ့ကျင့်ရေး ကိစ္စလေ့လာမှု
ဂျမေကာခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီး Hon. Edmund Bartlett က American Hotel & Lodging...
Sandals Resorts သည် အားလပ်ရက်များအတွက် ရက် 40 လက်ဆောင်များကို လုပ်ဆောင်နေပြီဖြစ်သည်။
ကာရေဘီယံ၏ ထိပ်တန်း ဇိမ်ခံပစ္စည်းအားလုံးပါဝင်သော အပန်းဖြေအမှတ်တံဆိပ် Sandals Resorts သည် ဆက်လက်လုပ်ဆောင်နေပါသည်။...
Montego ပင်လယ်အော်ရှိ ဂျမေကာသို့ သင်္ဘောစီးခြင်း
ဂျမေကာ ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီး အမေရိကားအချင်းချင်း သဘာပတိအသစ်...
ဝန်ကြီး Bartlett သည် အရေးကြီးသော UNWTO အထွေထွေသို့ ဦးတည်သွားသည်...
ဂျမေကာသည် အာဖရိကတွင် ခရီးသွားလာခွင့် ကန့်သတ်ချက်အသစ်များ ချမှတ်...
ဂျမေကာသည် စတော့ဟုမ်းမှ လေကြောင်းဝန်ဆောင်မှုအသစ်များကို ကြေငြာခဲ့သည်...
ယခု Jamaica သည်3ခုနှစ်တွင် Cruise လာရောက်သူ 2025 သန်းကို ပစ်မှတ်ထားသည်။
Montego ပင်လယ်အော်အတွက် တစ်ရက်တည်း ပျံသန်းမှု 47 ခု
ယခု Jamaica သည် Gastronomy Tourism အတွက် ၎င်း၏ မြင်ကွင်းများကို သတ်မှတ်ပေးသည်။
ဂျမေကာခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီး - ကျန်းမာရေးနှင့်ကမ္ဘာသစ်...
ဂျမေကာခရီးသွားလုပ်ငန်း- လက်စွဲအသစ်တွင် Spa Safety and Health
Sandals နှင့် Beaches Resorts သည် ရေငုပ်ခြင်း မဂ္ဂဇင်းအသစ် 13 ခု ရရှိသည်...
ယခုအခါ ဂျာမန်ခရီးသွားများသည် ဂျမေကာကို ရေလွှမ်းမိုးရန် စီစဉ်နေပြီဖြစ်သည်။
Jamaica Blitz သည် ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာစျေးကွက်များ- တရားဝင်အပ်ဒိတ်မှ...
ဂျမေကာခရီးသွားလုပ်ငန်းနှင့် Grupo Pinero- အထူးခရီးသွားလုပ်ငန်း...
သမိုင်းဝင် Falmouth ဆိပ်ကမ်း ဂျမေကာရှိ Cruise Call အသစ်...
ဂျမေကာရှိ မျှော်လင့်ချက်သစ်ကို လှုံ့ဆော်ပေးသည့် Sandals Foundation
ဂျမေကာ ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးက ကျောက်ဆူးမှာ ပြောနေတာ...
Travvy Awards တွင် ဂျမေကာသည် ရွှေနှင့် ငွေကို ရယူခဲ့သည်။
ဂျမေကာ ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီး၏ မိသားစုအား စာနာမှုပေးပို့...
ဂျမေကာသည် အမေရိကန်လေကြောင်းလိုင်းမှ ဝန်ဆောင်မှုအသစ်ကို ကြိုဆိုပါသည်။
Kingston Jamaica သည် 2022 ခုနှစ် ထိပ်တန်းအားလပ်ရက်အတွက် စာရင်းတွင် ယခု...
Bluefields Westmoreland Jamaica အတွက် ဘဝသစ်
ဂျမေကာသည် ဂျာမန်လေကြောင်းလိုင်းမှ ပျံသန်းမှုအသစ်များကို ကြိုဆို...
ခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် ရာသီဥတုပြောင်းလဲမှု၏ အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရမည်...
ဂျိမ်းစ်ဘွန်းရုပ်ရှင်သည် ယခုအခါ ဂျမေကာခရီးသွားလုပ်ငန်းဝယ်လိုအားကို မြှင့်တင်...
COP26- ခရီးသွား လုပ်ငန်းသည် အစိတ်အပိုင်းဖြစ်လိုသည်...
USA CDC "ခရီးသွားခြင်းကို ရှောင်ပါ" အဆင့်ကို ဂျမေကာအတွက် ယခုဖယ်ရှားလိုက်ပါပြီ။
Jackson Suber- White Sands Bahamas NCAA တွင် အံ့မခန်းအောင်ပွဲ...
ဗြိတိန်တွေ ပြန်လာပြီ။ UK အကြား တစ်ပတ်လျှင် ပျံသန်းမှု ၁၆ ကြိမ်...
ဂျမေကာခရီးသွားလုပ်ငန်းဝန်ကြီး Trelawny ကြောင့် အကြီးအကျယ် စိတ်မကောင်းဖြစ်မိ
ဆော်ဒီအာရေဗျလေကြောင်းလိုင်းသည် ကာရေဘီယံနိုင်ငံသစ်တိုးချဲ့ရန် စီစဉ်နေ...
ခရီးသွားလုပ်ငန်း ပြန်လည်ထူထောင်ရေး ကြိုးပမ်းမှုများသည် ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမှုမှ ကြီးမားသော တိုးတက်မှုကို ရရှိ...
Sandals Resorts မှ အသစ်ပြန်လည်ပုံဖော်ထားသော Sandals Royal...
UNDP မှ အဆင့်တိုင်းတွင် ခံနိုင်ရည်ရှိရန် အစွမ်းထက်သော တောင်းဆိုချက်...
Sandals Resorts သည် New Gordon “Butch” Stewart ကို ဂုဏ်ပြုသည်...
ကနေဒါနိုင်ငံသားများသည် ဂျမေကာတွင် ဟိုတယ်တွင်း PCR စမ်းသပ်မှုကို ကြိုတင်မှာယူနိုင်ပြီ...
Bartlett သည် Emirates လေကြောင်းလိုင်းနှင့် မိတ်ဆက်ရန် ဆွေးနွေးနေ...
Montego Bay အတွက် New Cruise Schedule တွင် Port Royal
ဂျမေကာခရီးသွားလုပ်ငန်းသည် အရေးကြီးသော အပျော်စီးသင်္ဘော ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှု ဆွေးနွေးပွဲများ ကျင်းပသည်။
ဂျမေကာနိုင်ငံသို့ ကနေဒါနိုင်ငံ မဟာမင်းကြီးရုံး လာရောက်လည်ပတ်...
ဂျမေကာသည် ၂၀၂၁ ခုနှစ်ကမ္ဘာ့ခရီးသွားဆုပေးပွဲတွင်ကြီးကြီးမားမားအနိုင်ရသည်
Sandals®ဇိမ်ခံပါဝင်သောအပန်းဖြေ Resorts ကာရစ်ဘီယံ ...
Sandals®အပန်းဖြေစခန်းများနောက်ပြန်လှည့်ခြင်းဖြင့်နှစ် ၄၀ ပြည့်အထိမ်းအမှတ် ...
ကမ္ဘာကျော်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားသောSandals® Resorts အမှုဆောင်ဥက္ကဋ္ဌ
TUI ၏ဂျမေကာသို့ပြန်လာခြင်းသည်ကြီးမားသော Game Changer ဖြစ်လိမ့်မည်
ခရီးသွားလုပ်ငန်းအပေါ် COVID-19 ၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုလျော့ပါးသက်သာစေခြင်း ...
ဂျမေကာသည်ကနေဒါအပတ်စဉ်ပျံသန်းမှု ၅၀ ကျော်ကိုအတည်ပြုသည်။
TPDCo တွင် ဦး ဆောင်မည့်ယာယီအမှုဆောင်ဒါရိုက်တာအသစ်
123 ... 16 နောက်တစ်ခု